Paid VPN vs Yemahara VPN: Sei Uchisarudza Yakabhadharwa VPN? | Kubva kuLinux
Isaac | | Featured, Networks / Maseva
Kana iwe uri kufunga kushandisa VPN sevhisiChokwadi iwe unotoziva kuti kune mamwe mahara masevhisi uye mamwe anobhadharwa. Vamwe vashandisi vanotsvaga kuenzanisa kweVPN mahara, uye vanotenda kuti vanovapa zvese zvavanoda kuti vadzivise kubhadhara peni.
Asi chokwadi ndechekuti haisi imwe yesarudzo dzakanakisa. Kana iwe uchida kuziva zvikonzero, mune ino gwara ini ndicharatidza zvese zvaunoda kuti uzive nezveVPN, saka unogona kusarudza yakanakisa pane zvaunoda uye usanyengedzwa ...
2 Zvimiro zvaunofanira kuteerera paunenge uchisarudza sevhisi yeVPN
3 Zvishandiso zveVPN
3.2 Kuvanzika uye kusazivikanwa
3.3 Tsvaga zvakatemerwa masevhisi
4 Yemahara vs yakabhadharwa VPN
5 NordVPN: yakachipa uye yehunyanzvi sevhisi
5.2 Mutengo uye nzira yekubhadhara
5.4 Kunakidzwa kwekushandiswa
Kana iwe ukashamisika chii chinonzi VPN (Virtual Yakavanzika Network), kana virtual private network MuchiSpanish, iwe unofanirwa kuziva kuti iri sevhisi iyo inokutendera iwe kuti ubatanidze kunetiweki zvakachengeteka nekuda kwekuti inowedzera iyo LAN network (yemuno netiweki network) pane yeruzhinji network seInternet. Gadzira chiteshi chakachengeteka chekuchinjisa sekunge iwe uri mune yakavanzika network.
VPN inopa zvikomborero zvakawanda, zvakadai se viga kubva kune kwakatangira network traffic uye yako IP. Iye mupi weVPN anokupa iwe imwe IP uye iyo inogona kunge iri yenyika dzisiri dzako. Izvi zvinogona kubvumidza mukana wekuwana masevhisi akarambidzwa munzvimbo yako yenzvimbo, izvo zvinopa zvakanakira kudzikamisa izvi zvikanganiso.
Iyo VPN inogona zvakare kunyorera network traffic. Panzvimbo pekuchinjisa dhata mune yakajeka mavara pakati peanotumira neanogamuchira (iwo), yakavharidzirwa. Izvi zvinoita kuti zvikonere kune vamwe vanogona kunge vachitsvaga traffic kuti vawane iyo ruzivo, iyo inobvumidza kusazivikanwa kukuru uye kuvanzika mukubhurawuza kwako. Ndokunge, zvinopa zvakavanzika zve data, imwe yembiru dzakakosha dzekuchengetedzwa kwemakomputa uye izvo zvinonyanya kukosha mumakambani kana nekufona.
Izvo zvinobatsirawo kuvimbika kwedata. Ndokunge, inovimbisa kuti iyo data inosvika kune iye anogamuchira nemazvo uye zvizere nekugadzira yakachengeteka chiteshi. Mune mamwe mazwi, zvinovatadzisa kuti vasabatwe munzira yekushandurwa kana kugadziriswa. Chimwe chakakosha chengetedzo chinhu.
Unogona kufunga kuti kumushandisi wemumba izvi zvakaoma kuzviita, asi warasika. Ikozvino maVPN masevhisi anopa maapplication yakapusa kugadzirisa uye kuvhura, kunyangwe iwe usina ruzivo rwehunyanzvi.
Imwe pfungwa isiriyo nezveVPN ndeyekuti sevhisi inoita zvese izvo, kunyanya kune mabhizinesi, inofanira kunge ichidhura zvakanyanya. Asi izvi zvakare zvinopesana, VPN inobuda zvakachipa kwazvo uye inopa zvakanakira izvo zvinogona zvakare kuwanikwa nedzimwe nzira dzinodhura kwazvo. Naizvozvo, ichaponesa mutengo mune mamwe anodhura matekinoroji.
Saka dambudziko riripi? Chokwadi ndechekuti kukanganisa kweVPN ivo vanodzika kune imwe: kubatanidza kumhanya. Asi nerombo rakanaka kuti nhasi masevhisi eVPN, kunyanya akabhadharwa, ane matekinoroji ekuona kuti kuita kwakanyanya. Naizvozvo, kumhanya kwekubatana kwako hakuregedze uye hautombozviona. Mhedziso, zvakawanda zvakanakira uye zvisingaite kushaya simba ...
Zvimiro zvaunofanira kuteerera paunenge uchisarudza sevhisi yeVPN
Paunosarudza VPN pane akati wandei zvinhu zvakakosha. Iwo ndiwo mapoinzi anoratidza kuti sevhisi yerudzi urwu yakakosha chaizvo. Kuti uzive kusarudza VPN yakanaka iwe unofanirwa kutarisira zvinotevera zvinhu:
Rusununguko rwekusarudza iyo IP: mamwe masevhisi eVPN anobvumidza iwe kusarudza sevha kuti ubatanidze kune iyo sevhisi, iine maseva akasiyana munyika dzepasirese. Izvi zvinogona kukubvumidza iwe kuti usarudze kwakatangira iyo IP yakapihwa kwauri. Nenzira iyoyo, unogona kubatana neVPN neIP kubva munyika yaunoziva kuti, sevhisi inezvirambidzo kune yako nzvimbo yenzvimbo, inoshanda.
Encryption algorithm- Encrypting network traffic inoshandisa kiyi yekunyorera uye maitiro ekushandura iyo yakajeka mameseji data kuita chimwe chinhu chisinganzwisisike zvachose. Kuchengetedzwa uye mashandiro eVPN yakasarudzika zvinoenderana neizvi, sezvo paine kusimba uye kuchengetedza algorithm, mukana mushoma wekuti ivo vazokwanisa kutsikisa traffic.
Speed- Ichi chinhu zvakare chinoenderana nekuvharira, sezvo iyo data iri kuendeswa inofanirwa kuverengerwa uye kubviswa, uye izvi ndizvo zvinonyatsodzora kubatana. Mahara maVPNs anowanzo kuve nehurombo hwakanyanya kupfuura vanobhadharwa, pamusoro pekunge uine zvirambidzo pamigwagwa.
Kuvanzika uye kusazivikanwa: mamwe maVPN anochengeta matanda ane huwandu hwedata kubva kumutengi uyo akabhadhara basa, vamwe vanochengeta matanda, zvichipa kusazivikanwa kukuru. Iwe unofanirwa kugara uchisarudza iwo anochengeta zvishoma sezvinobvira pamusoro pako.
Tsigiro: Mahara masevhisi akaganhurirwa mune izvi, asi akabhadharwa masevhisi kazhinji anopa vatengi maapplication kuwanda kwemapuratifomu kana anoshanda masystem. Semuenzaniso, yeApple, Windows, iOS, macOS, Linux, uye kunyange smart TV, ma routers, uye mabhurawuza ekuwedzera.
usability- Vazhinji vatengi maapplication anowanikwa kubva kuVPN masevhisi ari nyore kushandisa. Ivo vanoda zvirinani hapana kumisikidzwa uye bvumira kubatana nePush yebhatani. Kunyangwe iwe usina hunyanzvi hwemakomputa unogona kuzvishandisa pasina dambudziko.
Nzira dzokubhadhara: Mahara masevhisi haana rudzi urwu rwechinetso, sekumasevhisi akabhadharwa, unogona kusarudza pakati penzira dzakasiyana. Kubva pakubhadhara kubva kuApp kuzvitenga pachavo pama mobile platforms, kune dzimwe nzira dzakadai semakadhi echikwereti, PayPal, uye kunyangwe necryptocurrencies yakadai seBitcoin kusasiya chero chiratidzo chako.
DMCA inokumbira: United States kodzero yekuchengetedzwa kwekodzero ine zvibvumirano nenyika dzakasiyana kuti dzipe data kune vashandisi vakaita mhirizhonga senge kugadzirwa nekuparadzirwa kwezvinhu zvakachengetedzwa (piracy yesoftware, mabhuku, mumhanzi, mabhaisikopo, ...). Asi kune dzimwe nyika dzinoshanda senzvimbo dzepamutemo uye dzisingataure iyo data, iyo inokudzivirira zvakanyanya kana iwe wakashandisa VPN yekunyepedzera kushandisa.
Asistencia- Yehunyanzvi sevhisi yemahara VPN masevhisi akanyanya kushaya kana kusavapo mune dzimwe nguva. Kune rimwe divi, masevhisi ekubhadhara anopa sevhisi yemitauro yakawanda, kunyangwe muzviitiko zvakawanda iri muChirungu chete. Uye zvakare, ivo vanowanzo kukubatsira iwe nepo live chat, email, kana dzimwe nzira dzekubata maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pasvondo.
Unogona kusaona priori chikonzero chekushandisa VPN, asi chokwadi ndechekuti makambani ese ari maviri, chero saizi yaari, pamwe nevashandisi vekumba, vane zvikonzero zvakasimba zvekushandisa seVPN sevhisi. Kana iwe uchida zvimwe zvikonzero zvekutora imwe yeaya masevhisi izvozvi, heano mamwe makuru ...
Edza NordVPN imwe yeakanakisa maVPN pamusika. Iwe uchatarisa zvachose asingazivikanwe uye zvakachengeteka.
SARS-CoV-2 iri pano kuzogara, uye denda Izvo zvakakonzera kuti zvinhu zvakawanda zvifungidzwe zvakare. Pakati pavo nzira iyo iwe yaunoshanda uye kudzidza. Munguva yekuvharirwa, nzvimbo zhinji dzedzidzo dzakatanga kudzidzisa pamhepo makirasi, uye mamwe makambani akapa vashandi vavo mukana wekuti vashande nefoni.
Neramangwana risingazivikanwe rakapihwa kusava nechokwadi kwekuti pachave nemushonga here, kuti vachakwanisa kuuburitsa nenguva (uye kune wese munhu), uye kana paine kuitika kwekukurumidza kwechirwere, mabhizinesi mazhinji anogona kutanga kufunga nezve teleworking se chimiro chekusingaperi chekushanda.
Kune iwo zviitiko, kuvanzika uye kuchengetedzeka kweiyo zvakavanzika uye data yevatengi izvo zvinobatwa zvinoita kuti zvinyanye kukosha kushandisa VPN. Zvikasadaro iwe unenge uri munjodzi zvakanyanya pakurwiswa necyber, maindasitiri espionage, nezvimwe.
Kuvanzika uye kusazivikanwa
La kuvanzika ikodzero paInternet izvo zvakatyorwa zvachose, zvese nedzimwe hurumende, kana avo masosi enjere, anoshandisa hukuru hukuru pamwe nemakambani makuru anotora data rekubhurawuza kana kushandiswa kwemaapps avo vozotengesa kune vechitatu mapato kana kuti vaongorore kuburikidza Big Dhata yemishandirapamwe yako.
El kusazivikanwa Izvo zvakare zvinonakidza kwazvo, uye iine VPN, inosanganiswa kunyangwe nemamwe masevhisi akadai saTor, nezvimwe, vanogona kuvimbisa zvese zvakavanzika uye kusazivikanwa mukubatana kwako.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti yako ISP, internet service provider, inogona kuchengeta yako traffic data kwemakore. Izvi zvinodaro nekuti yako yese network traffic inoenda kuburikidza nemaseva avo. Zvese izvo zvekutsvagisa chiitiko zvinogona kupihwa kuhurumende, kushambadzira makambani, makambani, nezvimwe. NeVPN unogona kubvisa dambudziko iri.
Tsvaga zvakatemerwa masevhisi
Mazhinji mavhidhiyo ekushambadzira masevhisi, maapp shop, uye mamwe masevhisi ari inongorambidzwa kune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo. Zvakare, mamwe mapuratifomu emukati haapi zvakafanana kune imwe nyika senge kune imwe. Kana iwe uchida kubvisa izvi zvisizvo kamwechete uye zvachose, iyo VPN ndizvo zvaunoda.
kubudikidza ejemploFungidzira kuti iwe unoda kuona zvemukati kubva kuTV chiteshi inotepfenyura online kubva kune imwe nyika, asi iro sevhisi rinongowanikwa chete kune nyika yekwatangira. NeVPN, unogona kuwana IP kubva munyika iyoyo uye woiwana sekuti iwe une "chizvarwa" IP kubva ipapo.
Yemahara vs yakabhadharwa VPN
Dambudziko iro vazhinji vanaro nderekushandisa imwe ye inobhadharwa kana yemahara. Ichokwadi ndechekuti, kana totaura nezvekuchengeteka, sarudzo yakajeka. Pamusoro pezvo, masevhisi emahara haangogone kupa mashoma chengetedzo uye maficha ekuita, iwo zvakare ane zviremero zvakakomba panzira dzezuva nezuva kana dzemwedzi.
kubudikidza ejemploVamwe vangangobvuma 500MB pamwedzi, iri yakaderera kwazvo kune vazhinji vashandisi. Ndokunge, ivo vanongoshanda chete kana iwe uri kutsvaga kushandisa VPN mune mashoma kesi, uye nekushandisa zvakapusa. Semuenzaniso, yekushambadzira vhidhiyo uye nezvimwe, zvingave zvisina kukwana zvakakwana nekuda kwehuwandu hwedata rakabatwa mune izvo zviitiko, kunyanya kana iri HD, FullHD kana 4K.
Mahara VPN masevhisi zvakare gumira huwandu hwemidziyo zvakabatana panguva imwe chete. Ivo vanongobvumidza chete imwe paakaunzi. Izvo hazvifungiki kukambani, uye kune imba uko makomputa, mapiritsi, mafoni, materevhizheni akangwara, nezvimwe zvinowanzo kuwanikwa, zvakare ...
Uye iyo asi yezvose ndeyekuti kana ukasabhadhara mutengo weVPN unozopedzisira waibhadhara neimwe nzira, kungave kupererwa nokusashanda sezvaunotarisira, nekukanganisa kunoremedza basa rako, nekushambadzira kwavanopa, nezvimwe.
NordVPN: yakachipa uye yehunyanzvi sevhisi
NordVPN ndeimwe yemabasa anonyanya kukurudzirwa kubva pakusarudza. Inopa zvese zvakanaka zveyakabhadharwa sevhisi, asi pamutengo unodhura kwazvo zvekuti unenge unomiririra zero zero pahupfumi hwako. Zvirongwa zvavo uye kukwidziridzwa zvakachipa kwazvo, uye huwandu / mutengo muyero haugone.
Zvake zvakanakira kupfuura vamwe vakwikwidzi zviri pachena kana iwe ukatarisa ayo maficha:
Kambani inoshanda kubva Panama.
Minimal data kutema miti nekuda kwekusazivikanwa kukuru.
Anopfuura mazana mashanu maseva mu kupfuura nyika dze50 ine akasiyana IPs.
Inotsigira Netflix pasina matambudziko, pamwe neP2P kurodha pasi, rwizi, uye mamwe masevhisi ekushambadzira akadai seAmazon Prime, nezvimwe.
Yakachengeteka kwazvo encryption yekutenda kune iyo algorithm AES-256.
Protocol VhuraVPN uye IKEv2 / IPSec.
Email kana kurarama live chat rutsigiro 24 / 7.
Uye ndezvipi zvese izvi zvinyorwa zvinoshandura? Zvakanaka, ngatizvitsanangure zvishoma nezvishoma ...
Nekuva ne diki dhata dhata kubva kune vatengi, ivo havazove yakawandisa data kubva kwauri. Izvi zvinopa kusazivikanwa kukuru, uye zvinongonyora email iyo yawakanyoresa nayo uye muripo. Asi hazvinyorwe chero imwezve dhata pamusoro pako kana chiitiko chaunoita kubva kuhukama hweVPN.
Kuva kambani ne dzimbahwe muPanama, iri kushanda pasi pemitemo yenzvimbo iyi yepamutemo, uye mitemo yayo haifunge kubvuma zvikumbiro zveDMCA. Imwe poindi mukumufarira kwekuchengetedza kwako.
Rangarira kuti kunyangwe kubhadhara kuchigadziriswa seCloudVPN, kambani yakanyoreswa muUnited States, ichi chinongotora mari chete, asi kambani iri kuseri kweNordVPN ichiripo Teficom Co & SA iyo inoshanda pasi pemitemo yePanamani. Saka usavhunduke kana iwe ukaona izvo zvichiratidzwa mukubhadhara ...
Para kusaina kweNordVPN unogona kushandisa akati wandei nzira dzokubhadhara, senge PayPal, kiredhiti kadhi, UnionPay, AliPay, Google Play, Amazon Kubhadhara, cryptocurrencies, nezvimwe. Uye zvakare, ine imwe yemitengo yemakwikwi zvakanyanya muchikamu, saka haufanire kuisa mari hombe kuti utange kunakidzwa neVPN yako.
ari mitengo kubva kuNordVPN ndeiyi:
€ 3.11 / mwedzi yeiyo 2 uye 3 chirongwa chegore.
€ 6.22 / mwedzi yeiyo 1 gore kuronga.
€ 10.64 / mwedzi kana iwe uchingoda kuihaya kwemwedzi chete.
Zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti ine inonakidza kukwidziridzwa uye zvidzoreso zvaunogona kushandisa kuponesa zvakatonyanya pane ako ekunyorera neNordVPN. Uye kana usiri kufara, vanodzorera mari izere mushure memazuva makumi matatu, humbowo hwevimbiso yekuti NordVPN inonunura zvavanotaura uye haunganyadziswe.
NordVPN inozvirumbidza imwe yeiyo kukurumidza kumhanya wepasi rese, uye chokwadi ndechekuti haisi kuwedzeredza. Nebasa iri hauzove nemipimo kana iwe uchinge wapfuura imwe muganho kana matambudziko nekumhanyisa, pamusoro pezvo, zvinovimbisa kuti iwe unokwanisa kubatana ne6 kubatana panguva imwe chete kuti ugone kushandisa iyo VPN nemidziyo yako mbozha, smart TV, makomputa , nezvimwe.
Uku kumhanya kunowanikwa nekuda kwezvishandiso zvinodzivirira vamwe vashandisi kubva mukubata zvisina kunaka nekukanganisa mashandiro enetiweki, nekuda kwemaseva ayo anopfuura makumi mashanu ekukurumidza-akapararira pamusoro penyika dzinopfuura makumi mashanu kutenderera pasirese, uye neyakavandudzwa NordLynx protocol.
NordVPN maapplication anoda angangoita marongero uye iwe unogona kutanga kunakidzwa neVPN yako kubatana nayo chingobaya bhatani. Kunyanyisa kureruka neKukurumidza Unganidzo yekukurumidza kubatana, kusarudzwa kweinodiwa sevha, nezvimwe.
Uye zvimwe zvivakwa kuti iwe uve kuchengetedzwa nguva dzose. Mamwe masevhisi, kana akakundikana, bvisa pasina ziviso uye akufumure. Iwe uchafunga kuti iwe uchakavharwa neVPN kudzivirirwa kana usiri. Panzvimbo iyoyo, NordVPN ine Kill switch, iyo kana ikatadza inobvisa zvakare kubatana kweInternet kuitira kuti paisave nedata rinokanganiswa.
Kuchengetedzwa kweNordVPN hakungouya chete kubva encryption algorithm uye Uraya Chinja. Zvakare zveimwe matekinoroji uye maprotocol anoshandiswa neiyi sevhisi yandichazo tsanangura.
Kana iri algorithm, iwe unotoziva kuti inoshandisa AES-256, yakasimba algorithm iyo inoshandisa block encryption scheme iyo isina kutyorwa kusvika nhasi. Dziviriro yakachengetedzeka zvakanyanya kuchengetedza hukama hwako, uye neicho chekuvimba nacho chose.
Pamusoro peiyo encryption algorithm, zvakare ine maprotocol akachengeteka ayo NordVPN's VPN anovimba nayo, senge VhuraVPN uye IKEv2 / IPSec. Uye kana izvo zvisina kukwana, NordVPN inodzivirirawo kubva kuDNK kudonha, inovanza michina yakabatana mukati meLAN, uye inoita kuti zvikwanise kushandisa maseva eOnion kuburikidza neVPN kushandisa Tor seyakawedzera dura kana iwe uchida.
Nehunyanzvi CyberSec iyo zvakare inokutendera iwe kuchengetedza yako network kubva kune malware kutyisidzira uye kunetsa kushambadzira paunenge uchitsvaga. Izvo zvinowedzera kumwe kudzivirirwa pamusoro pezvese zvataurwa pamusoro, zvichiita NordVPN rimwe remasevhisi akasimba. Iwe unogona kunyange kutarisa ese mavhidhiyo eYouTube aunoda iwe usina kuratidzwa kushambadzira ...
Mamwe akabhadharwa uye emahara VPN masevhisi anoonekwa uye anovharirwa nemamwe mapuratifomu seAmazon Prime, Netflix, Hulu, nezvimwe. Muchiitiko cheNordVPN, izvi hazvisizvo, uye ine mamwe masevhisi akagadzirirwa kuita kuti iyi yemukati yekushambadzira ishande nemazvo pasina kumwe kumisikidzwa.
SmartPlay DNS Iyo tekinoroji iyo inobatsira kukunda iyo nzvimbo inorambidzwa yeaya masevhisi, saka haufanire kuita chero chinhu kunakirwa zvese zvakateedzana uye mabhaisikopo aunoda. Zvese zvinoitwa otomatiki uye zvakajeka kune mushandisi.
Uye kana iwe uchinetseka nezve P2P kurodha pasi, nerukova, nezvimwewo, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti ivo vanotsigirwa neNordVPN.
NordVPN ine maapplication eakasiyana mashandiro uye mapuratifomu, senge Android uye iOS mobiles, kana Linux, Windows uye macOS desktops, uye kunyangwe smart maTV ane Android TV. Uye iwe unogona zvakare kushandisa zvinowedzeredzwa kana zvinowedzera-mabhurawuza seC Chrome neFirefox.
NordVPN inopa 24/7 sevhisi, kuitira kuti iwe ugare wakanyatsoteerera kubvunza mibvunzo yako kana matambudziko neemail, kana nepo live chat kana uchida. Ehe, zvichave muChirungu, asi iwe unogona kushandisa muturikiri kuyedza kutaura pasina matambudziko ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Networks / Maseva » Paid VPN vs Yemahara VPN: Sei Uchisarudza Yakabhadharwa VPN?
Hazvina maturo kumabhasikiti, kana iwe uchida chaiyo vpn, saka bhadhara uone. Expressvpn, ndeimwe yezvinonyanya kudhura, kana isiri iyo inodhura kwazvo, asi iyo iri vpn uye zvimwe zvese hazvina maturo, kana iwe unayo, unonzwisisa mutengo wemutengo wayo uye muLinux chishamiso chaicho, muWindows I handizive, nekuti ini handishandise izvo zvinhu, ini ndinongoshandisa Linux pamakomputa angu ese, ini handina maviri antiki boot neWindows neLinux, kuti nditaure gare gare, ndiri Linux player, HAPANA, unoshandisa Windows uyezve Linux, Linux ndiyo inoshandisa chete Linux, nekuti Windows nhasi haina basa zvachose. Chero bedzi ini ndichigona, ini ndichagara ndichishandisa expressionvpn, kunyangwe ichidhura zvakadii, handina basa nazvo. Ini ndaive neNordvpn panguva iyoyo ndikakumbira mari kudzoserwa nekuti izvo hazvina kukosha chero chinhu, ndosaka zvakachipa, kukwezva veruzhinji nemitengo yayo, kwete nekuita kwayo kwakanaka. Kana iwe uchida chaiyo vpn, expressionvpn uye bhora.
Ndinovimba iyi Firefox VPN inoshanda ...
Iyo VPN inzira inoshandiswa zvakanyanya kune vashandi kuti vawane zvakachengeteka makambani emakambani avo, neLinux kune StrongSwan, OpenVPN, nezvimwe. Aya ndiwo masisitimu eOpenSource anokwikwidza nemaitiro akabhadharwa.Chinhu chete icho kambani inofanirwa kunge iine yeruzhinji IP uye bandwidth zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi vayo vari kure
Aya maOpenSource VPNs anogona kutoshandiswa kugadzira nzira dzakachengeteka pakati pehofisi yepakati nematavi awo.
Ini ndinoshandisa NordVPN uye inoita zvakanaka paLinux. Ini handivimbe maVPN emahara zvakanyanya. Nhasi pane twitter ndakaverenga izvo nguva pfupi yadarika maVPN emahara akaburitsa data: https://www.vpnmentor.com/blog/report-free-vpns-leak/
Baidu ajoina iyo Open Invention Network uye inopa mukana kune akasiyana patent